Dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab oo weerar culus ku qaaday ciidamo ka tirsan AMISOM – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab oo weerar culus ku qaaday ciidamo ka tirsan AMISOM
Dagaalyahano ka tirsan Xarakada Al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday ciidamo ka tirsan kuwa Midowga Afrika ee AMISOM oo maraayay deegaanka No.60 islamarkaana kusii jeeday deegaanka Ceel-wareegoow ee gobolka Sh/hoose.
Weerarkaasi oo markii dambe dagaal fool ka fool ah isku badalay ayaa waxa uu socday muddo ku dhaw saacad, waxayna labada dhinac isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan.
Ilaa iyo haatan lama oga qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkaasi, balse warbaahinta qaar ee Al-shabaab ayaa lagu daabacay in askar badan oo ka tirsan AMISOM lagu dilay weerarkaasi, inkastoo aan la sheegin inta uu qasaaraha la egyahay.
Dhinaca kale, ma jirto wax war ah oo kasoo baxay saraakiisha AMISOM ama kuwa maamulka gobolka Sh/hoose ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ay kaga hadlayaan weerarkaan ciidanka AMISOM loogu geeystay inta u dhaxeeysa deegaanka NO.60 iyo Ceel-wareegoow ee gobolka Sh/hoose.
Si kastaba ha ahaatee, dagaalyahanadda Al-shabaab ayaa inta badan jidka u gala islamarkaana weerar ku qaada ciidanka AMISOM iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya, oo inta badan qasaare xoogan kasoo gaarta weeraradaas.